प्रचण्ड सरकारलाई नेम्वाङले किन दिए नचल्ने घडीको संज्ञा ? « Pahilo News
प्रचण्ड सरकारलाई नेम्वाङले किन दिए नचल्ने घडीको संज्ञा ?
प्रकाशित मिति : 15 April, 2017 9:42 pm
२ वैशाख । नेकपा (एमाले)का स्थायी कमिटी सदस्य एवं संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले एमाले अझै १० महिना सरकारमा नजाने बताएका छन् ।
उनले एमालेको अर्जुनदृष्टि संविधान कार्यान्वयन बाहेक केही नभएको भन्दै अझै कम्तीमा १० महिना एमाले सरकारमा नजाने दाबी गरेका हुन् । झापा–काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा पूर्व सभामुख समेत रहेका नेम्वाङले भने,’ ‘हामीले जसरी पनि आगामी माघ ७ भित्रमा तीन वटै तहका निर्वाचन पूरा गर्नुपर्ने छ । त्यसैले अहिले एमालेको ध्यान सरकारमा होइन, संविधान कार्यान्वयनमा छ ।’
उनले अहिले एमालेलाई सरकारको कुनै चासो नभएको भन्दै माघपछि एमालेले बहुमतसहितको सरकार बनाउने दाबी गरे । ‘पहिला जननेता मदनकुमार भण्डारी हुँदा एमालेमा यस्तो लहर चलेको थियो,’ नेम्वाङले भने, ‘अहिले पनि त्यस्तै लहर चलेको छ । यो लहरले हामीले यति भन्न सक्ने भएको छौँ– ‘सूर्य आयो–आयो, एमाले आयो–आयो ।’
उनले पनि एमाले एकताबद्ध हुने हो र काँग्रेस–माओवादीले आ–आफ्नै दलमा मात्र भोट हाल्ने हो भने पनि एमालेलाई बहुमतसहितको पहिलो पार्टी बन्न कसैले रोक्न नसक्ने दाबी गरे ।
एमाले सरकारमा आउँछ भन्ने भ्रम
नेम्वाङले काँग्रेस माओवादीका केहीले एमाले निर्वाचन सार्ने गरी सरकारमा आउन लागेको छ भन्ने हल्ला फैलाएको भन्दै त्यसको खुलेर प्रतिवाद गरे । ‘यी सबै भ्रमपूर्ण कुरा हुन,’ उनले भने, ‘अहिले निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने भनेर अर्को हल्ला पैmलाइएको छ । त्यो पनि भ्रमपूर्ण कुरा हो ।’ उनले वैशाख ३१ मा निर्वाचन गर्दा केही जिल्लामा समस्या भए फेरि सात वा १५ दिन पछि गर्न सकिने भन्दै निर्वाचन एकै चरणमा हुनेमा सबैलाई ढुक्क बस्न आग्रह गरे ।
एमालेले भनेको कुरा बुझ्न चार महिना
नेम्वाङले एमालेले भनेको कुरा बुझ्न सरकारलाई चार महिना लागेको बताए । ‘एमालेले संविधान संशोधन प्रस्ताव गलत छ भनेको थियो,’ उनले भने, ‘यही कुरा बुझ्न सरकारलाई चार महिना लाग्यो ।’ अहिले फेरि संशोधन प्रस्ताव ल्याएर सरकारले गलत गरेको आरोप लगाए । ‘एमालेलाई पनि सहमतिमा ल्याउन संशोधन प्रस्ताव ल्याएको भनेर हल्ला गरिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग कुनै सल्लाह भएको छैन । हामी त्यो संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गर्दैनौँ ।’
सरकार नचल्ने घडी
नेम्वाङले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई नचल्ने घडीको संज्ञा दिए । ‘अहिलेको सरकार नचल्ने घडी जस्तै हो,’ घडी छ भनेर मात्र के गर्नु घडीले समय नै नदिएपछि ?’
नेपालको संविधान २०७२ होइन
नेम्वाङले नेपालको संविधान नाममा पनि समावेशी भएको उल्लेख गरे । ‘अहिले धेरैले ‘नेपालको संविधान २०७२’ भनेर भन्छन्, त्यो गलत छ,’ उनले भने, ‘धेरैले विक्रम सम्वत् राख्नुपर्छ भने कसैले इ.सं. राख्नुपर्छ भने । कसैले नेपाल सम्वत राख्नुपर्छ भने । तर, हामीले संविधानको नाम पनि समावेशी बनाउनुपर्छ भनेर ‘नेपालको संविधान’ राखेका हौँ ।’